Semalt: Chii Chinonzi Spam Bot uye Sei Kuti Uchidzivirire?
Kana iwe wakapinda nechokuita neGoogle Analytics uye ukacherechedza zvingangoerekana zvaitika muzvikamu, mikana ndeyokuti bots uye kutumira spam zvakakunda webhusaiti yako. Pakuona, iwe unganzwa kuti ichakutengesa iwe kutengesa uye kutungamirira, asi kutarisa pedyo nepamusoro pezvidzidzo zvichakupa pfungwa yekuti magwara ari kubva kupi. Zvokuputika zvinonyanya kukonzerwa nechepasi-hutsika webhusaiti yepamutemo . Mumakore achangopfuura, webmasters akawanda uye akawanda vakanyunyuta kuti referrer spam bots vanokwira nzvimbo dzavo uye zvinoratidzika sevanhu chaivo vakashanyira mapeji enyu ewebhu. Iko tsvuku mutsva SEO uye zvisina kunaka spam bots inogona kukanganisa deta yako yeGoogle Analytics munhamba huru. Uyezve, idzi mabhi dzinoonekwa sezvavakashanyira nzvimbo yako kazhinji asi huwandu hwekugadzirisa hunoita 100% - zona 5 escuela de fotografia. Iwe unopiwa pasina chinyorwa chinyorwa, uye nzvimbo yako yepaiti inotanga kuderera zuva nezuva.
Chii chinonzi Spam Bot?
Frank Abagnale, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotsanangura kuti bots ndeyezvirongwa zvinokwanisa kuita zviito pasina chero mazano. Bhuku rinotarisirwa kuita mabasa akawanda ayo munhu chaiye anogona kugumisa mukati memawa, mazuva kana vhiki. Bots inoda mashomanana mashomanana chete kuti uite mabasa akawanda panguva imwe uye yakasikwa kushanyira nzvimbo yako unnaturally.
Kusiyana pakati pezvibvumirano uye zvisiri pamutemo
Bhuku rakarurama kana rechokwadi ndeye injini yekutsvaga s yakadai seBing, Yahoo, uye Google. Vanokwanisa kunyora webhusaiti yenyu uye vanoratidza mapeji enyu ose mu mitsva yekutsvaga mhinduro . Aya mabhoti haakuvadzi nzvimbo yako chero ipi zvayo, asi bhoti dzisiri pamutemo dzinofanirwa kukuvadza website yako..Zvinoratidzika sezvavanoshanyira nzvimbo yako uye vanogona kukuwana maonero akawanda, asi haasi nzvimbo yakanaka uye inonzi "bots bots". Nyaya yakakurumbira uye yakakurumbira spam referral bots ndiyo chiitiko-tracking.com, free-share-buttons.com, social-buttons.com, darodar.com, uye get-free-traffic-now.com.
Kune dzimwe misiyano yakapoteredza mawebsite, uye URL dzavo dzinowanika mumabhuku eGoogle Analytics pakarepo. Kana iwe uchitevera URL dzavo kuti uzive zvakawanda nezvekambani idzi uye marapirwo avo ekupikisa, mikana iyo ichakuvadza website yako. Nemuenzaniso, kana iwe uchiona kutumirwa kwepamu (kuona-your-website-here.com) muGoogle Analytics account, iwe unofanira kuchibvisa nokukurumidza.
Ungadzivirira sei spam bots mune account yako yeGoogle Analytics?
Inenge dzose nzvimbo dzekutsvaga kuparadzirwa dzakawanda dzinokanganisa uye dzinofanira kuregwa nokukurumidza nokukurumidza. Kana ukasangana nekutsvaga kutsvaga kwepamu mubhuku rako reGoogle Analytics, unofanira kuisvina kunze, asi kunonoka kweiyi nzira ndeyokuti mabhi akaipa acharamba achishanyira website yako zvakare. Zvinoreva kuti vachabvisa mashizha evharedzi yako uye zvichaita kuti kutakurwa kwekutsvaga kwewebsite yako kuwedzere. Zvisinei, zvinobvira kushandisa iyo .htaccess file kubvisa mawebsite ega spam. Zvakakosha kutaura kuti iyo .htaccess file inzira yakasimba yekuvhara nzvimbo yose inoshungurudza. Nhanho yekutanga ndeyekuisa imwe code mukati mako .htaccess file. Kana iyi faira isiri kushanda zvakanaka, unofanira kuisa itsva .htaccess file kune midzi yedunhu.
Imwe nzira inokurumidza uye yakajeka yekugadzira bot spam ndeyokugadzira mafiriji epamusoro pakero yako yeGoogle Analytics. Pinda muakaunti yako uye chengeta paMutungamiri tab. Kubva pane izvi, unofanira kuenda kuNew Create New View sarudzo, uye pasi peshoko rekuona zita rekuona, uchaona bhora reSpam Free. Pano unofanidza paNew Filter sarudzo uye usakanganwa kutumidza filter yako.